राप्रपालाई थप मन्त्रालय दिएर एमालेविना संविधान संशोधन गर्ने ! यसरी हुँदैछ जोडघटाउ
राप्रपालाई थप मन्त्रालय दिएर एमालेविना संविधान संशोधन गर्ने ! यसरी हुँदैछ जोडघटाउ एमालेविना संविधान संशोधन गर्ने कुरा काल्पनिक मात्रै होः ज्ञवाली
काठमाडौं । सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन दलको बैठकमा नेकपा एमालेको चेतावनीपछि सरकारले पनि एमालेविना संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै प्रस्ताव नरोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश हुन नदिने, सदन र सडकबाटै त्यसको विरोध गर्ने जनाएपछि सरकारले पनि नेकपा एमालेविना दुई तिहाई पुर्याउने रणनीति अपनाएको एक नेताले बताए ।
संविधान संशोधनका लागि नेकपा एमालेसहित केही सानादल बाहिर रहे पनि सरकारले दुई तिहाई पुर्याउन सक्छ तर त्यसमा राप्रपाले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकता भएपछि सरकारमै रहने कि बाहिरिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न बुधबार संयुक्त केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
सरकारले राप्रपाका अझै केही नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएर संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउने रणनीति तयार गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
“नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्यो र प्रस्ताव पारित हुनै नदिने रणनीति अपनायो भने सरकारले पनि एमालेविना दुई तिहाई पुर्याउन सक्छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “एमालेबाहेक अहिले नेमकिपा पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देखेका छौं । त्यसबाहेक अन्य दलहरु हामीसँगै हुनेछन् । राप्रपाका केही नेतालाई सरकारमा ल्याउनेबारेमा पनि कुराकानी भएको छ ।”
सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि बुधबार विहान छलफल गर्न लागेको जनाएका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई अहिले ३९६ मत आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेसँग १८२ सांसद छन् ।
संसद्मा अहिले ५९४ सदस्य कायम छन् । ६०१ सदस्यीय संसद्मा २ जना सरकारले मनोनित नै गरेन । राप्रपाका सूर्य बहादुर थापा, कांग्रेसका सुशील कोइराला र माओवादी केन्द्रका भक्ति पाण्डेको निधन भएको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा चयन भइन् भने बाबुराम भट्टराई संसद् सदस्यबाटै राजीनामा दिएका छन् ।
५९४ सांसदको दुई तिहाई सरकारले हिसाब गरे पनि पुग्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
उनका अनुसार राप्रपाले निर्णय गर्न बाँकी छ भने कांग्रेसभित्र पनि एउटा समूह एमालेलाई बाहिर राखेर अघि बढ्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।
“हामी अहिले नै के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं,” राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठले भने, “बुधबार संयुक्त केन्द्रीय समितिको बैठक छ । त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले नेकपा एमालेले अहिले विरोध गरे पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले मुलुकमा यतिवेला दुई वटा अतिवाद सोच भएकाहरु हावी भएको भन्दै त्यसले मुलुकको निकास नदिने आरोप लगाए ।
“एउटा राष्ट्रवादको नारा दिने मण्डले राष्ट्रवाद र अर्को जहिले पनि आन्दोलन र क्रान्तिको थ्रेट दिने हावी भएका छन,” मन्त्री नायकले भने, “यसले मुलुकको हित गर्दैन ।”
मन्त्री नायकले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकोले असन्तुष्टहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले निर्वाचन मुलुकको लागि आवश्यक भएकोले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्यवनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले एमालेले संशोधनमा सहयोग नगर्ने भने पनि यो उसको तत्कालको रिस मात्रै भएको दावी गरे । उनले अघि थपे,“ओली सरकार ढल्दा प्रचण्डसँग रिस उठेको होला ।”
संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले पनि जनताको कठघराबाट भाग्न नमिल्ने उनको भनाई थियो ।
तर एमालेले एमालेविनाको दुई तिहाइले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने धारणा बताएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा एमालेलाई सहमतिमा नल्याइ अघि बढिए मुलुक दुर्घटनातर्फ अघि बढ्ने चेतावनी एमालेको छ । “एमालेबाहेक दुई तिहाई जुट्ने र संविधान संशोधन हुने कुरा काल्पनिक मात्रै हो,” नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने, “त्यसको कुनै सम्भावना पनि छैन । कथम्कदाचित त्यसरी अघि बढ्न खोजे मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।”
उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना टुंग्याउने र निर्वाचनको तयारी गर्न छाडेर संशोधनको कुरा मात्रै उठाउनुले सरकारप्रति आशंका जन्मिएको बताए ।
संसद्मा रहेका राजनीतिक दल र संख्या
तमसपा नेपाल ३
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) २
थरुहट तराई पार्टी नेपाल २
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक १
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल १
दलित जनजाति पार्टी नेपाल १
विराटनगर । मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्या वितरण गरेको भन्दै केही युवाले नेपाली कांग्रेसको मोरङ ४ नम्बर क्षेत्रीय समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी... ४९ मिनेट पहिले